I-MAYORAZGO: I-CASA MONTES. IPALENTINE MOUNTAIN
Cordovilla de Aguilar, Castilla y León, i-Spain
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Laurentino
I-El Mayorazgo iyindawo yezokuvakasha yasemaphandleni eyakhiwe izindlu ezintathu eziqashisayo ezigcwele, etholakala kwesinye sezakhiwo ezihluke kakhulu e-Cordovilla de Aguilar lapho sithatha khona igama. Okwakuqala kusukela ngekhulu leshumi nesikhombisa, kuyingxubevange yezakhiwo ezamukela konke ukusetshenziswa nezidingo zomnotho wasemaphandleni wezolimo nemfuyo kule ndawo. Ukuvuselelwa ngokucophelela kunikeze izindlu ezintathu ezinobuntu obuhluke kakhulu, ngokusekelwe ekuguqulweni okuhloniphekile.
Indlu yaseMontes, ngaphambili eyayisetshenziswa njengendawo yokugcina izimpahla kanye nendawo yotshani, yaphakamisa ukuvuselelwa ngenhlonipho enkulu ngomsuka wayo. Inendawo enemisebenzi eminingi ehlala igumbi lokuphumula, igumbi lokudlela nekhishi ngaphansi kwesakhiwo esimangalisayo sophahla lwamapulangwe, enikeza imibono yesinye sezihlahla ze-oki ezizungeze idolobha.
-6 izihlalo (7 ezinombhede owengeziwe)
-Igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili.
-Amakamelo okulala amabili anemibhede eyodwa eyodwa.
-Igumbi lokuhlala-igumbi lokudlela-ikhishi.
- 3 amagumbi okugeza agcwele.
ICordovilla de Aguilar iyidolobhana elincane lezintaba elitholakala ngaphansi kwemizuzu eyishumi ukusuka enkabeni yesifunda, i-Aguilar de Campoo. Ngezinsuku zayo yayinabantu abacela ikhulu abazinikele emisebenzini yezolimo nemfuyo, kodwa namuhla asifinyeleli kwabayishumi nanhlanu abahlala lapha unyaka wonke. Njengoba izungezwe izihlahla ze-oki, iyindawo ekahle yokuphumula nokuzihambela ezindleleni zayo ezinhle nezithengekayo, ezinye zazo zibhalwe ngezindlela ezithakazelisayo. Izingane zijabulela ikakhulukazi i-Cordovilla, ngaphezu kwenkundla yokudlala, imigwaqo yayo engenazo izimoto kanye nezimfunda zedolobha zilungele ukudlala ngokuphepha.
Ngesikhathi sokuhlala kweklayenti, bobabili u-Rosa no-Tino bazokujabulela ukukusiza nganoma yini oyidingayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Cordovilla de Aguilar namaphethelo